Cube 2: Sauerbraten yakanakisa yekutanga munhu shooter mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Iwe unofarira kuita uye kupfura mitambo, ipapo musoro wenyaya watichataura nezvawo nhasi ndine chokwadi kuti uchaufarira. Cube 2: Sauerbraten ndeye yemahara yekutanga munhu shooter mutambo, yakavhurwa sosi uye ndiye anotsiva iyo Cube FPS.
Kunge Cube yekutanga, Chinangwa chemutambo uyu chinonakidza chekare chikoro Deathmatch mutambo muoti, iyo zvakare inobvumidza mepu kugadzirisa kuti iitwe pamwe mumutambo.
Sauerbraten ese ari maviri mutambo wevhidhiyo uye injini injini kune wekutanga-munhu shooter mitambo yemavhidhiyo. Iyo inosunungurwa semahara software.
1 Nezve Cube 2: Sauerbraten
2 Zvinodiwa kuti umhanye Cube 2: Sauerbraten
3 Maitiro ekuisa Cube 2: Sauerbraten paLinux?
Nezve Cube 2: Sauerbraten
sauerbraten Iyo yakavakirwa pavhidhiyo mutambo Cube, zvakare ichigovana zvinangwa zvayo zvekugadzira uye uzivi.
Nekudaro, nepo mamamepu eCube aine chimiro chisingatenderi nzvimbo mbiri dzemepu kuti dziwirirane pakukwirira kwakasiyana, Sauerbraten inobvisa iyi muganho nekupa zvizere mamepu-mativi.
En Mutambo wevhidhiyo unosanganisira marongero, mavara, zvombo, zvigadzirwa uye matatu-matatu mhando.
Cube 2: Sauerbraten Iyo ine maviri mutambo modes ayo ari ega mutambi modhi (mutambi mumwe chete) uye multimedia muoti (vatambi vakawanda).
Yekutanga mutambo mamiriro anotipa isu mune maviri maitiro ekutamba yekutanga ndeye Iyo yemutambo yakajairwa modhi inobvumira isingaite kutamba kurwisa akasiyana siyana mamonya. Tanga mutambo wako nekumisikidza yako mode uye mepu.
Yechipiri mutambo modhiyo Rufu Mechi yemumwe mutambi 10 masekonzi mushure mekutanga kwemutambo, chitsama chakatarwa chevavengi chichatanga kuoneka nekukurumidza uye chichava chakagadzirira kudzingirira mutambi.
Zvinhu zvinogara zvichirapa panzvimbo dzakatarwa pamepu kupa mutambi zvigaro zveammo uye zvinorova. Chinangwa ndechekuparadza vese vavengi.
Mukana wekutsakatiswa nemuvengi mutambo mutambo unotangazve.
Pakupedzisira, multiplayer mode inoratidza anotevera mutambo modes:
Kusununguka kune vose: zvese zvinopesana zvese.
Coop edit: mepu yekugadzirisa ichishandira seboka.
Duel: 1 vs 1 duels
Teamplay: kutamba kwechikwata.
Instagib: Hapana zvinhu zvinoonekwa, asi mutambi wese ane pfuti zana uye chete poindi yehutano.
Instagib timu: Zvakafanana sechikwata, hapana zvinhu zvinoonekwa, mutambi wese ane pfuti zana uye chete poindi yehupenyu.
Kushanda: hapana zvinhu zvinoonekwa, mutambi wese ane zvombo zvese, zvombo zvizere uye nezvombo zveyero.
Kubudirira timu: Izvi zviri muchikwata, hapana zvinhu zvinoonekwa, asi mutambi wese ane zvombo zvese, zvombo zvizere uye nezvombo zveyero.
Insta jecha: iyi modhi yakaita kunge instagib asi kusiyana nenyaya yekuti mutambi wega wega achabviswa kubva mumutambo kana abviswa kusvikira mutambi mumwe chete arambe ari mupenyu, anokunda
Insta clan nhandare Iyi modhi yakafanana neAnca Arena, asi kusiyana nezvikwata, timu inosara iri mupenyu nekubvisa imwe inokunda iyo kutenderera.
Tora mureza: Tora Mureza.
Zvinodiwa kuti umhanye Cube 2: Sauerbraten
ari zvishoma zvinodiwa izvo zvaunofanirwa kuve nazvo muchikwata chako kukwanisa kumhanyisa zita iri pakombuta yako zvinotevera
1 GHz CPU kana kupfuura
256 MB ye RAM
GeForce 4 MX vhidhiyo kadhi kana yakaenzana.
2GHz CPU kana kupfuura
GeForce 6600 kana yakaenzana GPU
Maitiro ekuisa Cube 2: Sauerbraten paLinux?
Si unoda here kuisa uyu mutambo pakombuta yako unogona kuzviita nenzira inotevera. Kuti uwane zita iri isu tichaenda kunotsigira Flatpak package kufambisa kuisirwa mune yedu system.
Kune izvi, zvinonyanya kukosha kuti isu titsigirwe neFlatpak mune yedu system.
Iye zvino Tinofanira kuvhura terminal uye titeedzere unotevera kuraira:
Uye wakagadzirira neizvi isu tichava neCube 2: Sauerbraten yakaiswa mune yedu system.
Tinogona kuwana mutambo mune yedu yekushandisa menyu yakagadzirira kuitiswa. Kana iwe usingakwanise kuwana iyo yekutanga mutambo, unogona kuimhanya nemirairo inotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Cube 2: Sauerbraten yakanakisa yekutanga munhu shooter mutambo
Iyo nyowani yekuvandudza vhezheni yeWine 3.11 yave kuwanikwa